Wbar: Doon aad ufudud oo loogu talagalay Openbox, Fluxbox ama Xfce | Laga soo bilaabo Linux
Dhab ahaantii w bar waxaa loo isticmaali karaa mid kasta Deegaanka Desktop, laakiin waa ku habboon tahay Xfce o Maareeyayaasha Daaqadaha sida FurBox y Fluxbox.
En Debian Ku rakibisteeda waa mid aad u fudud, waa inaan furnaa terminal oo aan dhignaa:
Marka la rakibo waa inaan xoogaa jaangooyaa. Si loo dedejiyo howshan waxaa jira tan .deb taasi waxay noo oggolaanaysaa inaan wax walba ku qabanno garaaf ahaan iyo si fudud. Markaan soo dejino ayaan ka saareynaa kordhinta .odt iyo voila, waanu rakibi karnaa.
Hadda, marka la qaabeeyo waa inaan tixgelin si faahfaahsan u bixinno. Haa w bar xamuul ka hor walxaha kale -U sheeg naftaada wallpaper-ka tusaale ahaan- Hufnaanta dekeddu si sax ah uma soo bandhigi doonto. Si tan loo xaliyo, waxaan ku abuurnay qoraal yar gudaha / usr / maxaliga / bin / magaca leh bilow_wbar.
Oo waxaan soo gelin doonnaa waxyaabaha soo socda:
Tan, waxa aan sameyn doono ayaa dib u dhigga bilowga w bar ilaa 4 sekan (waan kordhin karnaa ama yareyn karnaa waqtiga), markaa waxaan u gudbinaa xuduudaha lagama maarmaanka ah si markaa w bar ku rar qaabkeenna. Waxaan arki karnaa cabbirkan markaan kaydinayno qaabeynta adoo adeegsanaya - WbarConf, dhinaca bidix ee hoose ee daaqadda.
Kadibna waxaan siinnaa rukhsadda fulinta faylka:
Hadda waa inaan ku darnaa codsiyada bilowga ah Xfce. Aan aadno Liiska »Dejinta» Kalfadhiga iyo Bilowga »Codsiyada Si toos ah u bilow oo waxaan ku darnaa mid cusub oo uga tagaya sidan:
Waxaan ku tusayaa sida ay u egtahay Miiskeyga Miiska ..
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Wbar: Meel aad ufudud oo loogu talagalay Openbox, Fluxbox ama Xfce
Uma baahni kubbadda madadaalada, waan ogahay marka aad ku guuleysato bakhtiyaanasiibka inaad iibsan doonto Mac Pro
Marka hore waxaad iibsaneysaa Samsung Galaxy S II ka hor Mac, dhab ahaantii ... waxaan sameyn lahaa isla hehe
Xaqiiqdii, waqtiga aan ku guuleysan karo bakhtiyaanasiibka, Samsung Galaxy XXIIIVVXII waa inuu horey u sii jiraa.
Halkan moodelkani wuxuu ku kacayaa 1500 oo doolar in la beddelo, imisa ayaad rabtaa, HAHAHAHA.
Hal ii soo dir fadlan V_V
Hambalyo, waxay umuuqataa mid aad ufiican, tan ayaa igudhameysa go'aankeyga caawa waxaan rakibay XFCE.
Dhig xiriiriyeha si aad u soo dejiso sawirka gidaarka ayaa u muuqda mid fiican
Xaqiiqdii qof, oo aan horay u naqaannay, ayaa u soo bixi doona inuu dhaleeceeyo, hahahaha.
Hahahaha nasiib wacan taas oo ha niyad jabin markii ugu horreysay ee aan halkaan u imaado inaan kaa caawiyo si kasta oo ay tahay 😀 Oh by the way, asalka waxaa lagu rakibay xirmooyin asal ah, ma ogi inay kuwa Gnome ka yimaadeen ..
+1 Tan waxaan ugu yeeraa Boostada lish sifiican barta hoose ee howsha waa Xfce guddi ama tan2 .. Sidoo kale waa inaan joojiyaa guddiga xfce4 launcher panel .. sideen kuhelaa jawigan desktop-ka?
Waa hagaag, saameyn ahaan, waa Tint2, oo cunaysa 5Mb halka xfce4-panel uu cuno 14 Mb. Waan arki doonaa haddii aan sameeyo qoraal ku saabsan sida looga tago Desktop-ka qaabkan, in kastoo ay aad u fudud tahay. 😀
Aad u qurux badan, aad u qurux badan In kastoo shaqsiyan aan door bido xfce panel. Jidka Elav, maxaa fiidiyoow ah oo aad isticmaashaa? VLC? ama Siidayn sharafeed? Nabaro
😀 Mahadsanid. Waxaan isticmaalaa VLC iyo Gnome-Mplayer ..
Haye iyo taasi ma saameynayso waxqabadka kombuyuutarkaaga? suurto gal in aan khaldanahay laakiin vlc ma isticmaalo qt?
Qoraal wanaagsan. Ama ugu yaraan miiskaaga ayaa u muuqday mid sidan u qurux badan 🙂
Sida muuqata ma jiraan noocyo 64-bit ah oo ka mid ah wbar ama WbarConf 🙁
Kaliya hal faahfaahin ayaa ka dhiman si miiskaaga looga dhigo mid hagaagsan. Liis menu ama ugu yaraan hal summad oo ku yaal menu-ka wbar.
Mahadsanid Eduardo. Dhab ahaan, codsiyada aan marwalba adeegsado waxay kujiraan Dock. Oo haddaan doonayo menu, kaliya waa inaan midig gujiyaa miiska nooca Openbox. 😀
bogga http://code.google.com/p/wbar/downloads/list Waxaa jira noocyada loogu talagalay 64bits
Ku jawaab si aad u xirto
Laakiin miyaanay ahayn isku mid in guddi la dhigo maareeyaha guddiga XFCE? Taasi waa, shaqeynta horeyba uga jirtay XFCE.
Dhibaatada ka jirta guddiga Xfce ayaa ah in ay ka badan tahay Tint2 .. Taasi waa intaas.
Ah, laakiin markaa ram_usage (tint2 + wbar) <ram_usage (xfce panel)?
Ma aqaano, waxay u egtahay maya 😉
Sikastaba xaalku ha ahaadee waxaan aaday XFCE 4.8 waana ku faraxsanahay sidii markii aan rakibey Linux-kii iigu horeeyey oo aan arkay inuusan u burburin sida wax kale Redmond
Hagaag, rumayso ama ha rumaysan, tint2 wuxuu cunaa wax kayar xfce4-panel. Sikastaba, waad xor u tahay inaad isticmaasho waxkastoo aad rabto ...
Ha xanaaqin inaysan dhaliil aheyn. Kaliya waa in la caddeeyo. tint2 wuxuu cunaa wax ka yar xfce4-panel, laakiin tint2 + wbar uma maleynayo inay wax ka yar cuneyso. Tani waa ujeedkeyga.
Laakiin vibes wanaagsan.
Kama xanaaqo, dhammaan faallooyinka halkan waa la soo dhaweynayaa, waxa dhaca ayaa ah in Kormeerahayga Nidaamku si kale ii sheego
Haddayna xisaabtu iga gaabin, 5Mb + 6 Mb = 11 Mb oo waxaan u maleynayaa 11 Mb <14 Mb .. Mise waan qaldanahay?
Xusuusnow in qalabka mid waliba ka duwan yahay, halkan sidoo kale waa inaad aragtaa qadarka RAM, kayd, noocyada gaarka ah ee maktabadaha iyo codsiyada mid walba leeyahay, iwm iwm.
Just kaamil ah (sida had iyo jeer xDD). Aad baad u mahadsantahay ^^.
runtii waa deked wanaagsan, laakiin OS-kayga (xiddig cas) waxay ku baaba'aysaa ilo badan
Si fudud waa halka ugu quruxda badan uguna shaqeysa sanduuqa furan mana cuno ilaha (11 mb oo kayar 15 mb lx panel)
wbarconf ma jirto qaab lagu rakibo, waxaan ka soo dejiyey goobo kala duwan mar walbana way i sheegtaa
Waxaan isku dayayaa inaan rakibo feylal aan (ama dambe jirin)
Si fiican kuma fahmin, adigu ama ma soo dejisan kartaa wbarconf?
Haddii aad soo dejisan karto, markaa dhibaatadu waxay tahay inaadan rakibi karin?
Waxaan kaa caawin doonaa inaadan walwalin 😀
Xaqiiqdii, waan soo dejisan kari lahaa laakiin qalad bay i siisay markii aan rakibayay
Ugudambeyn, anigoo raacaya bog kale oo aan ku guuleystey inaan ka rakibo koodhka isha inkasta oo ay igu kacday hadana way shaqeysaa markaa waan ku faraxsanahay soon, dhawaan waxaan heysan doonaa laptop-ka gadaal gadaashiisa oo leh crunchbang fashion total hehehe
Ah ok ok, weli waan ku faraxsanahay inaan ogaado in aakhirkii aad xallisay dhibaatada 😀
Wbarconf aniga ima shaqeynayo, waan rakibay, laakiin ma socon doono
gudaha Arch Linux wax walboo waa la rakibay, oo waxaan dhigay:
mar kasta oo aan jacayl badan u qaado distoorkan <3
Ku jawaab marcosSSS
Android GS: Mawduuc cagaaran oo loogu talagalay Gnome-Shell